YAAB : Xaas aad qabaysid saacado kooban Diinta Islaamka ma qabtaa -Daawo Video-gan - iftineducation.com
iftineducation.com – Wargays kasoo baxa dalka Iran ayaa daaha ka rogay kor u kaca tirada guurka loo yaqaano’’guurka mutcada’’oo ah isagu guur ku meel gaadh ah. Wargayska ayaa arinkan ku sababeeyay saboolnimo baahsan ee haysata dhalinyarta,oo ay sabab u tahay cunaqabataynta dhaqaale ee lagu hayo Iran.
Wargayskan oo la yidhaahdo’’Kooraan’’ ayaa yidhi’’ war bixino bulsho oo daaha la rogay ayaa tilmaamay kor u kaca waxa loogu magac daray ’’guurka mutcada ah’’ ee isagu ah guurka ku meel gaadhka ah oon ahayn guurka caadiga ah. Waxa sido kale uu wargaysku sheegay in ay aad u faafeen baraha internet ka ee guurkan ku meel gaadh ah oo ay maamulaan buu yidhi wargaysku dumar lasoo furay.
Warbixanta ayaa waxa ay cadaysay in ‘‘guurkan ku meel gaadh ka ah’’ uu koobsanaya xiliyo kala duwan oo ay kamid tahay saacado,bilo iyo sanad taasina ay ku xidhan tahay xaaladaha dhaqaale ee qofka iyo shahaadooyinka cilmiga ee ay haystaan labada dhinac .
Sida la ogsoon yahay madahbka shiiciga ah ayaa waxa uu ogol yahay ’guurka mutcada’’ ama guurka ku meel gaadhka ah iyada oo guurkani uu ka jiro dadka madhabkan aaminsan dhexdooda .